Amacala amabini e-Intanethi Explorer kwiWindows 8.1
U-Microsoft unyanzelisa ukuba kubekho i-Internet Explorer enye kwi-Windows 8.1, kodwa inobuso obubini- ujongano lwendabuko, olufana nolo ukhe walubona amaxesha amaninzi ngaphambili; kunye nothungelwano lwesitayile seMetro esilingana ngqo nethayile, isikrini esigcweleyo, amava eWindows 8.1 yeMetro.
Umthamo we-lexapro woxinzelelo
Ngandlela thile umahluko ngumba weesemantiki. Ithayile iMetro IE kunye nefestile yakudala ye-IE yabelana Ukunikezela ngenjini - isiqwenga se-IE esikhupha yonke into kwiphepha lewebhu kwaye siyijike ibe yinto onokuyifunda. Useto kwabelwana ngalo nobuso bobabini be-IE-loo nto iyimfuneko kuba iMetro IE inezicwangciso ezimbalwa kakhulu ezikhoyo onokuzitshintsha.
Kodwa njengoko uza kubona kaninzi-ninzi, izikhangeli ezimbini zisebenza kakhulu, ngokwahlukileyo.
Ukusetyenziswa ngokubanzi, uya kutsalela kuhlobo olunye lwe-IE okanye enye. Ukuba uchitha ixesha elininzi kwiwebhu kwithebhulethi yokuchukumisa, iithayile ze-Metro IE zinokulingana ngendlela osebenza ngayo. Ukuba kukho imouse kunye nebhodibhodi ekhoyo, uya kugqiba nge-desktop ye-IE yakudala, rhoqo kunoko.
Akusiyo isigqibo esicacileyo nangona kunjalo. Isikhangeli ngasinye sinezibonelelo.
Inguqulelo yedesktop ye-IE
Beka olona lwazi lubalulekileyo lokukhangela ebusweni bakho. Ungatsho, ngokukhangela, zeziphi iithebhu ozivulileyo kwaye yeyiphi iwebhusayithi ekuyo. Ukubeka iisayithi ezizithandayo kwindawo yabo yokuhamba kulula. Ungacofa iisayithi kwibar yomsebenzi yakho yeWindows.
Igcina lonke useto lwakho lwe-IE. Thepha nje okanye ucofe i icon yegiya yezixhobo, okanye uphawu lweenkwenkwezi ukuseta iiFavorites. Umzekelo, ukuseta iphepha lasekhaya kwi-desktop IE kulula. Kodwa wena ngekhe setha iphepha lasekhaya leMetro IE.
Le nxalenye iyabhidisa. Wena unako tshintsha i-IE iphepha lasekhaya ngelixa usebenza kwi-Metro IE-swayipha ukusuka ngasekunene, khetha useto lweeSetingi, emva koko ukhethe, kwaye uye apho. Kodwa iphepha lasekhaya olikhethileyo alisebenzi kwiMetro IE: Isebenza kuphela kwidesktop.
Inye into eyahlukileyo: Ukuba uyicima ngesandla iMetro IE (tsala phezulu, emva koko yonke indlela), kwixesha elizayo xa liqala, liza nephepha lasekhaya. Kodwa kuzo zonke ezinye iimeko, xa uqala iMetro IE, ufumana iphepha lokugqibela ovulekileyo.
Kukuvumela ukuba usebenze zonke ezi plugins, iinkqubo, kunye neebar zesixhobo ohleli uziqhuba. Ezi plugins zibandakanya iMicrosoft Silverlight, iMicrosoft ActiveX, iAdobe Reader (ukuze ubone iiPDF ngokungathi zingamaphepha ewebhu), i-LastPass okanye i-AI RoboForm yokugcina nokulawula amagama agqithisiweyo, iMozulu yeBing, iibhlokhi zentengiso, iibhlokhi zeJava, kunye neYahoo! Isixhobo se bar.
Inguqulelo yethayile yeMetro ye-IE, kwelinye icala, inezibonelelo zokwenyani, nazo:
Isikrini sonke sinikezelwe kumxholo wephepha elinye lewebhu. Akukho zongeziweyo-ezinje ngebha yedilesi, iithebhu, okanye iimenyu-ezijikelezayo. Ukuba usebenza kwiscreen esikhulu, izinto ezongeziweyo mhlawumbi ayisiyonto enkulu. Kodwa ukuba ukwiskrini esincinci (njengethebhulethi), izinto ezingaphandle zinokuthatha indawo eninzi enexabiso lesikrini.
Isiphumo secala le-benadryl
Ngaphandle kwezimbalwa kakhulu, ayivumeli iiplagi-ins okanye iinkqubo zokongeza, izandiso, iibar zesixhobo, okanye nantoni na enokuthi inyuse imisebenzi. Ewe, oko kuthetha ukuba awukwazi ukusebenzisa iMicrosoft Silverlight, ulawulo lweMicrosoft ActiveX, iJava Runtime Environment (eyayisetyenziswa nguMicrosoft ukusasaza njengenxalenye yeWindows), Isixhobo seInternet Explorer Developer okanye iBar Toolbar, (er, iBing Bar), okanye Isixhobo se bar seMSN.
Ngapha koko, awukwazi nokusebenzisa IMicrosoft i-add-ins, iiplagi, okanye iibar zesixhobo, kungaphantsi kakhulu kwezo ezivela kwezinye iinkampani ezinje ngeBuza okanye iYahoo!.
Ngokususa yonke into engafunekiyo (kubandakanya iziqwenga ezininzi ze-flotsam ezenziweyo, ezasasazwayo nezikhuthazwe yiMicrosoft), iMetro IE ikhawuleza kakhulu, iyunifomu ngakumbi, ilula kwibhetri, kwaye ikhuseleke ngakumbi kunayo nayiphi na enye inguqulelo ye-IE.
Nangona iMetro IE ihlawulisa kweli hlabathi litsha elinesibindi sokufakwa kweeplagi kunye neebar zesixhobo eziguqulweyo, inguqulelo yakudala ye-desktop ye-IE ihamba ngenqanawa kanye, ngokungathi akwenzekanga nto.
Ukubona ukuba kuthetha ntoni kwilizwe lokwenyani, thelekisa la manani mabini alandelayo. Inye ibonisa iPDF njengoko ijongiwe kwiMetro IE 11 -iscreen-split, kunye neMetro Reader app. Eli lilandelayo libonisa ngokuchanekileyo iphepha elinye elijongwe kwinguqulelo yedesktop ye-IE 11, kufakwe neFoxit Reader.
KwiMetro IE, ukucofa ifayile yePDF kwiziphumo kwiMetro Reader yeprogram ebonakala kwicala lasekunene lesikrini. Kwinguqulelo yakudala ye-desktop ye-IE, ucofa ifayile yePDF ezisa isiseko sokufunda iPDF, ukuba uyifakile enye - kule meko, iFoxit Reader.
Okwangoku, yazi nje ukuba iMetro IE ayinakusingatha iiwebhusayithi ngendlela oqhele ukuziphatha ngayo.
alka seltzer iyeza elibandayo
cyanocobalamin 1000 mcg / ml
ufikelela njani kude kwi-pc
iiwindows zingenisa imifanekiso kunye nevidiyo
ungathatha ibuprofen kunye ne-naproxen kunye
uzondla kangaphi iinkukhu